2 Ahene 23 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
2 Ahene 23:1-37
23 Na ɔhene soma ma wɔkɔboaboaa Yuda ne Yerusalem mpanyimfo nyinaa ano+ baa ne nkyɛn. 2 Afei ɔhene ne Yuda mmarima nyinaa ne Yerusalemfo nyinaa ne asɔfo+ ne adiyifo no ne ɔman no nyinaa, efi akumaa so kosi ɔkɛse so,+ kɔɔ Yehowa fie hɔ, na ofii ase kenkan+ apam+ nhoma+ a wohui wɔ Yehowa fie+ hɔ no mu nsɛm wɔn nyinaa asom. 3 Ɔhene gyinaa edum no ho,+ na ɔyɛɛ apam+ Yehowa anim sɛ obedi Yehowa akyi,+ na ɔde ne koma+ nyinaa ne ne kra+ nyinaa bedi ne mmara nsɛm+ ne n’adansesɛm+ ne n’ahyɛde+ so, na wadi apam no mu nsɛm a wɔakyerɛw wɔ nhoma+ yi mu no so. Na ɔman no nyinaa suaee sɛ wobedi apam no so.+ 4 Na ɔhene hyɛɛ ɔsɔfo panyin Hilkia+ ne asɔfo a wodi hɔ no ne apon ano ahwɛfo+ no sɛ wonyiyi anwenne a wɔyɛ maa Baal+ ne ɔbosom dua+ no ne ɔsoro asafo+ nyinaa no mfi Yehowa asɔredan no mu. Afei ɔkɔhyew ne nyinaa wɔ Yerusalem kurotia, Kidron+ ho mfuwa mu, na ɔde ɛho nsõ no kɔɔ Betel.+ 5 Na ananafo anyame no asɔfo a Yuda ahene de wɔn sisii hɔ sɛ wɔnhyew afɔrebɔde wɔ sorɔnsorɔmmea hɔ wɔ Yuda nkurow mu ne mmeae a ɛbemmɛn Yerusalem no, oguu wɔn adwuma no; wɔn a na wɔhyew afɔrebɔde ma Baal+ ne owia ne ɔsram ne sodiak nsorommakuw ne ɔsoro asafo+ nyinaa nso, oguu wɔn adwuma no. 6 Afei nso, oyii ɔbosom dua+ no fii Yehowa fie hɔ de kɔɔ Yerusalem kurotia, Kidron subon no mu, na ɔhyewee+ wɔ Kidron subon no mu, na ɔyam no muhumuhu, na ɔtow mfutuma no guu ɔmanfo amusiei.+ 7 Bio nso, asɔrefie mmarima nguaman+ no, obubuu wɔn adan a ɛwɔ Yehowa fie hɔ no, baabi a na mmea no nwene ntamadan ma ɔbosom dua no. 8 Ɛnna ɔde asɔfo no nyinaa fi Yuda nkurow mu bae sɛ obegu sorɔnsorɔmmea a asɔfo no hyew afɔrebɔde wɔ hɔ no ho fĩ, efi Geba+ kosi Beer-Seba;+ obubuu kurow pon ano sorɔnsorɔmmea a ɛwɔ kurow sohwɛfo Yosua pon ano no, faako a ɛwɔ kurow pon no benkum so, nea wɔfa hyɛn kurow no mu no. 9 Sorɔnsorɔmmea asɔfo+ no de, wɔamma Yehowa afɔremuka a ɛwɔ Yerusalem no anim, nanso wodii paanoo a mmɔkaw nnim,+ wɔn nuanom mu. 10 Na Tofet+ a ɛwɔ Hinom mma bon+ mu no, oguu ho fĩ sɛnea ɛbɛyɛ a obiara remma ne babarima anaa ne babea mfa ogya mu+ mma Molek.+ 11 Afei nso wamma apɔnkɔ a Yuda ahene de maa owia no amfa ahemfie panyin Natan-Melek adidibea+ a ɛwɔ ntwironoo mu hɔ no amma Yehowa fie hɔ bio, na ɔde ogya hyew nteaseɛnam a wɔde maa owia+ no. 12 Na afɔremuka a Yuda ahene yeyɛe a ɛwowɔ Ahas abansoro pia atifi+ ne afɔremuka+ a Manase sisii wɔ Yehowa fie adiwo abien no, ɔhene bubui na ɔyamee wɔ hɔ, na ɔtow mfutuma no guu Kidron subon no mu. 13 Sorɔnsorɔmmea a ɛwowɔ Yerusalem anim+ wɔ Ɔsɛe Bepɔw no nifa so, nea Israel hene Solomon+ sisi maa Sidonfo atantanne Astoret+ ne Moabfo atantanne Kemos+ ne Ammonfo atantanne Milkom+ no, ɔhene guu ho fĩ. 14 Obubuu+ abosom adum no mu asinasin na otwitwaa abosonnua no, na ɔde nnipa nnompe hyɛɛ hɔ ma. 15 Betel+ afɔremuka no ne sorɔnsorɔmmea a Nebat ba Yeroboam+ a ɔmaa Israel yɛɛ bɔne+ no yɛe no, obubuu saa afɔremuka no ne sorɔnsorɔmmea no. Afei ɔhyew sorɔnsorɔmmea no, na ɔyam no muhumuhu, na ɔhyew ɔbosom dum no. 16 Bere a Yosia dan ne ho no, ohuu adamoa a ɛwowɔ bepɔw no so no. Enti ɔsoma ma wɔkɔfaa adamoa no mu nnompe bɛhyewee+ wɔ afɔremuka no so de guu ho fĩ, sɛnea Yehowa asɛm+ a nokware Nyankopɔn nipa no ka too hɔ+ no te. 17 Na obisae sɛ: “Nkaebo bɛn na mihu wɔ ha yi?” Na kurow no mufo ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɛyɛ nokware Nyankopɔn nipa a ofi Yuda+ bae a ɔkaa nea wode ayɛ Betel afɔremuka+ yi ho asɛm too hɔ no ɔdamoa.”+ 18 Ɛnna ɔkae sɛ: “Momma ɔnhome.+ Mma obiara nnka ne nnompe.” Enti wɔanka ne nnompe ne odiyifo+ a ofi Samaria bae no nnompe. 19 Bio nso, sorɔnsorɔmmea afie+ a ɛwowɔ Samaria nkurow mu+ a Israel ahene+ sisi de hyɛɛ Onyankopɔn abufuw+ no, Yosia yiyii ne nyinaa, na ɔyɛɛ no sɛnea ɔyɛɛ Betel+ de no pɛpɛɛpɛ. 20 Na ɔde sorɔnsorɔmmea asɔfo a na wɔwɔ hɔ no nyinaa bɔɔ afɔre+ wɔ afɔremuka no so, na ɔhyew nnipa nnompe wɔ so.+ Ɛno akyi no, ɔsan kɔɔ Yerusalem. 21 Afei ɔhene hyɛɛ ɔman no nyinaa sɛ: “Munni twam+ mma Yehowa, mo Nyankopɔn, sɛnea wɔakyerɛw wɔ apam nhoma yi mu no.”+ 22 Efi atemmufo a wobuu Israel atɛn no nna mu ne Israel ne Yuda+ ahene nyinaa nna mu no, na wonnii twam bi sɛ eyi da.+ 23 Nanso Ɔhene Yosia afe a ɛto so dunwɔtwe mu no, wodii twam yi maa Yehowa wɔ Yerusalem.+ 24 Afei nso adebisafo+ ne asumanfo+ ne terafim honi+ ne abosom fĩ+ ne atantanne+ a abepue Yuda asase so ne Yerusalem no, Yosia tuu ase na ama wadi mmara+ no mu nsɛm so, nea wɔakyerɛw wɔ nhoma+ a ɔsɔfo Hilkia kohui wɔ Yehowa fie hɔ+ mu no. 25 N’anim no, ɔhene biara amma sɛ ɔno a ɔde ne koma nyinaa ne ne kra nyinaa+ ne n’ahoɔden nyinaa dan baa+ Yehowa nkyɛn sɛnea Mose mmara no te pɛpɛɛpɛ, na n’akyi nso, obiara ansɔre a ɔte sɛ ɔno. 26 Ne nyinaa akyi no, Yehowa annan amfi n’abufuhyew kɛse no ho, abufuhyew a ɛdɛw Yuda so,+ Manase nneɛma bɔne a ɔyɛe de hyɛɛ no abufuw+ no nti. 27 Na Yehowa kae sɛ: “Yuda+ nso mɛtow no afi m’anim akyene+ sɛnea metow Israel kyenee+ no; mɛtow kurow a mapaw yi, Yerusalem ne ofie yi akyene, ofie a mekae sɛ, ‘Me din bɛtena hɔ’+ no.” 28 Yosia ho nsɛm a aka ne nea ɔyɛe no, wɔakyerɛw ne nyinaa wɔ Yuda ahene bere so nsɛm nhoma+ no mu. 29 Ne nna mu na Egypt hene Farao Neko+ baa Asiria hene nkyɛn wɔ asubɔnten Eufrate+ ho, na Ɔhene Yosia fii adi sɛ ɔne no de rekosi ani,+ nanso bere a ohuu no ara na okum+ no wɔ Megido.+ 30 Enti ne nkoa de n’amu too teaseɛnam mu fi Megido kɔɔ Yerusalem,+ na wosiee no wɔ ne damoa mu. Ɛnna asase no sofo faa Yosia ba Yehoahas,+ na wɔsraa no sii no hene ma odii ne papa ade. 31 Yehoahas+ bedii ade no, na wadi mfe aduonu abiɛsa, na odii hene asram abiɛsa wɔ Yerusalem. Ne maame din de Hamutal+ a ɔyɛ Yeremia a ofi Libna no ba. 32 Ɔyɛɛ Yehowa ani so bɔne sɛnea n’agyanom yɛe no ara.+ 33 Farao Neko+ guu no nkɔnsɔnkɔnsɔn+ wɔ Ribla,+ Hamat asase so, na wamma wanni hene bio wɔ Yerusalem, na ɔmaa asase no tuaa+ dwetɛ+ dwetikɛse ɔha ne sika dwetikɛse+ biako. 34 Afei, Farao Neko de Ɔhene Yosia ba Eliakim+ sii hene ma odii ne papa Yosia ade, na ɔsesaa ne din frɛɛ no Yehoiakim. Yehoahas de, ɔde no kɔɔ Egypt, na ɛhɔ na okowui.+ 35 Yehoiakim de dwetɛ+ ne sika no maa Farao. Ɔman no nkyɛn na ogyigyee tow,+ na ɔde dwetɛ no maa Farao sɛnea ɔhyɛɛ no no. Ogyigyee dwetɛ ne sika tow no fii ɔmanfo no nkyɛn sɛnea obiara tow+ a wɔatwa ama no te, na ɔde maa Farao Neko. 36 Yehoiakim+ bedii ade no, na wadi mfe aduonu anum, na odii hene mfe dubiako wɔ Yerusalem.+ Ne maame din de Sebida a ɔyɛ Pedaia a ofi Ruma no ba. 37 Ɔyɛɛ Yehowa ani so bɔne+ sɛnea n’agyanom yɛe no ara.+
2 Ahene 23